नजिक न्युज | कंगना रनवतः एडल्ट फिल्म छाडेर कसरी बलिउड क्विन बनिन्
२०७७ असोज १५ गते बिहिबार | 1 October, 2020
कंगना रनवतः एडल्ट फिल्म छाडेर कसरी बलिउड क्विन बनिन्
करियरका लागि संघर्ष गर्दा-गर्दै थाकेकी कंगना कसरी यौनजन्य फिल्ममा काम गर्न तम्सिइन् ? कथा मार्मिक छ । जतिसुकै प्रयास गरेपनि उनले कुनै फिल्म पाएकी थिइनन् । त्यही झोंकमा एउटा फिल्ममा साइन गरिन्, जुन फिल्म सि ग्रेडको फिल्म थियो । ब्लु फिल्मकी हिरोइन जस्तै आफुलाई पेश गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो तर उनी विवश थिइन् ।
अंग्रेजी बोल्न नजानेपछि
सुरुवाती दिनहरु सम्झदै कंगनाले भनेकी छिन्, ‘यस उद्योगको मान्छेहरु चाहन्छन् कि, मैले बोल्ने हक छैन । र, म कुनै अनावश्यक चिज हुँ । मलाई थाहा थियो कि, राम्ररी अंग्रेजी बोल्न आउँदैन । त्यही कारण मान्छेले मेरो मजाक उडायो ।’
अंग्रेजी भाषामा पोख्त नभएकै कारण फिल्मबाट रिजेक्ट भएको तितो अनुभव छ, उनीसँग ।
फिल्ममा शीर्ष भूमिका खोज्ने र हिरोको भन्दा बढी पारिश्रमिक लिने बलिउड अभिनेत्री कंगना रनवतको जीवन-कथा फिल्मी शैलीको छ । उनले करियरको पूर्वाद्धमा अनेक उतार–चढाव झेलिन् । त्यही बेला हो, उनले एडल्ट फिल्ममा काम गर्ने निर्णय लिएकी ।
कंगना स्वामी विवेकानन्दकी भक्त हुन् । उनी ध्यानमा निकै रुची राख्छिन् । शाकाहार छिन् । एक सर्वेक्षणमा उनलाई भारतको सबैभन्दा हटेस्ट भेजिटेरियनको सूचीमा राखिएको थियो ।
कंगना बलिउडकी यस्ती अभिनेत्री हुन्, जसले हिरोले बराबर पारिश्रमिक डिमान्ड गर्छिन् । हिरो बराबर मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी पनि । कंगनाले फिल्म ‘रंगून’का लागि आफ्ना अपोजिट शाहिद कपुरले भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएकी थिइन् । उनको पारिश्रमिक भारु १० करोड हाराहारीमा छ ।
अभिनेता हृतिकलाई गोप्य इमेल पठाउने कुरा उप्काएर उनले विवादको बिऊ रोपिन् । कंगना र हृतितकले एक–अर्कालाई सन् २०१६ मा कानूनी नोटिस पठाएका थिए । कंगनाको दावी के थियो भने उनीहरु दुबै सम्बन्धमा थिए र हृतिकले उनीसंग विवाह गर्ने वचन दिएका थिए । हृतिकले यो कुरालँई ठाडै अस्विकार गरिदिए । उनले दुबैले संगै काम मात्र गरेको बताएका थिए । हृतिकले त उक्त कुराका लागि कंगनाले आफूसंग सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने कुरा समेत बताएका थिए ।
‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ’ भनेझै हृतिकको गोप्य इमेल कान्डले अरु थुप्रै बलिउड अभिनेतालाई ‘बिटुलो’ बनाइदियो । र, यो प्रकरणले उल्टै कंगनालाई नराम्ररी पछा¥यो । उनी विवादै विवादको भूँमरीमा फँसिन् ।
कंगनालाई कलाकारहरुले नै वहिष्कार ?
कपिल शर्माको शोको एउटा श्रृंखलामा अभिनेत्री कंगनाले आफ्नो स्वभाव कहिले पनि परिवर्तन हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको भनाइ थियो—‘म बनावटी जीवन बाँच्नुमा विश्वास गर्दिन, सत्यलाई सत्य तथा झुटोलाई झुटो भन्नलाई म हिच्किचाउँदिन ।’ उनको यस्तै ठाडो बोलीका कारण बलिउड उद्योगमा कंगनाका दुश्मनहरुको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गैरहेको छ ।
तर, कंगनलाई यो कुराको कुनै मतलव छैन । उनले आज पनि उत्तिकै काम पाइरहेकी छिन् । आज उनले जति पनि फिल्महरुमा काम गरिरहेकी छिन्, ती सबैमा उनी स्वयं नै ‘हीरो’ हुन् । उनले निर्वाह गर्ने भूमिका पनि प्रभावकारी हुन्छ । यति मात्र होइन, उनी ती अभिनेत्रीहरु भन्दा उत्कृष्ट स्थितिमा छन्, जो ठूला अभिनेताहरुको फिल्ममा केवल शो–पीसको रुपमा मात्र देखा पर्छन् ।
कंगनाले जसरी खुलेर बलिउडका ठूला–ठूला सेलिब्रेटीसंग ‘पंगा’ लिएकी छिन्, त्यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने आगामी दिनमा खानदेखि देवगणसम्म, कुमारदेखि धवनसम्मका कुनै पनि अभिनेताले उनीसंग शायदै कुनै फिल्ममा अभिनय गर्न मन पराउने छन् ।
अर्कोतिर, कंगना स्वयं पनि ती अभिनेताहरुसंग अभिनय गर्न चाहान्छिन् जस्तो लाग्दैन । यी बलिउड अभिनेताहरुका फिल्ममा अभिनेत्रीहरुले गर्ने काम खासै केही पनि बाँकि रहँदैन । यस्तो अवस्थामा कंगना उनीहरुका फिल्मको अंग बन्न शायदै मन पराउने छिन् ।
यतिमात्र होइन, कंगना बलिउडका दिग्गज निर्माता निर्देशकका विरुद्ध समेत लडिसकेकी छिन् । कपिल शर्माको शोमै उनले निर्माता–निर्देशकका करण जौहरका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भनेकी थिइन्-‘उनी त्यस्तो शो चलाउँछन्, जसमा तपाईंको अण्डरवेयरको रंग कस्तो छ ?’ अथवा ‘तपाईं बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईंले आफूलाई फलानी हिरोइनको बेडरुममा पाउनु भयो भने के गर्नु हुन्छ ?’ जस्ता अर्थ न बर्थका प्रश्न सोधिन्छ । यस्तोमा, करण जौहर जस्ता बलिउडका हस्तीसंग सम्बन्ध बिगार्न शायदै कसैले सोच्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कंगनाले बलिउडमा काम पाइरहेकी छिन्, भविष्यमा पनि पाइरहलिन्, तर सुपरस्टारहरुका फिल्महरुमा भने उनको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
त्यसो त कंगनाको कसैसंग झगडा नभएको बेलामा पनि उनले ती सुपरस्टारहरुका फिल्ममा काम गर्ने सौभाग्य कहिले पनि पाएकी थिइनन् ।
कंगनालाई सञ्चारकर्मीले वहिष्कार गरेपछि
बलिउड अभिनेत्री कंगनाको नयाँ फिल्म ‘जज मेन्टल है क्या’ को मुम्बईमा आयोजित एउटा कार्यक्रम सञ्चारकर्मीहरुको वहिष्कारका कारण रद्द भएको थियो । उक्त फिल्मले प्रचार–प्रसारका लागि मुम्बईमा एउटा भव्य समारोह आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त समारोहमा कंगना तथा निर्मात्री एकता कपूर पनि सहभागि हुने कार्यक्रम थियो ।
भारतका ठूला मिडियाहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । यद्यपि, कंगना सहभागि हुने समारोहलाई वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका अधिंकाश सञ्चारकर्मीहरु उक्त समारोहमा उपस्थित नै भएनन् । ठूला सञ्चारमाध्यममा सञ्चारकर्मीहरु आफ्नो समारोहमा अनुपस्थित भएपछि बाध्य भएर आयोजकले उक्त समारोह नै रद्द गरिएको घोषणा गर्न बाध्य भए । समारोह रद्द गर्नु पर्ने कारणको रुपमा अभिनेत्री कंगना बिरामी भएको भनियो । यद्धपि, उनी बिरामी नभएको सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए ।
एउटा समाचारमा जनाइए अनुसार कंगनाको लागि उक्त समारोह निकै महत्वपूर्ण थियो । यद्यपि, उनलाई त्यो बेला झट्का लाग्यो, जब उक्त समारोहमा फोटोग्राफरहरु समेत उपस्थित भएनन् । उनलाई कसैले ‘जब समारोहको कभरेज गर्न कुनै पनि सञ्चारकर्मी उपस्थित छैनन् भने त्यो बेला समारोह नै रद्द गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ’ भन्ने सुझाव दिएपछि अन्तिम अवस्थामा आएर कंगनाले उक्त समारोह रद्द भएको घोषणा गराएकी थिइन् ।
कंगना एक पुरुषार्थी
मणिकर्णिका । कंगनाले केन्द्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मात्र होइन निर्देशन गरेको चलचित्र पनि हो यो । तर, यो चलचित्र सुरुवातदेखि नै विवादित भयो । विवादको यो सिलसिला प्रदर्शनपछि पनि जारी रह्यो । उनी यस चलचित्रको विवादमा मात्र नभएर निर्देशक क्रिशसँग पनि विवादमा परिन् । त्यसबेला कंगनाको पक्षमा बोल्ने बलिउडकर्मी कोही थिएनन्, सिवाय अनुपम खेर र तनुश्री दत्त । तनुश्रीले कंगना निकै राम्रो कलाकार भएको र कंगनाको जस्तो खुबी अरुसँग नभएकाले उनको रिस गर्नेको संख्या धेरै भएको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘कंगना ए ग्रेट हैन, ए प्लस ग्रेडको अभिनेत्री हुन् ।’
तनुश्रीका अनुसार पुरुस्वर्थ देखाउनेहरु पनि कंगनासँग डराउने गर्छन् । यसै कारण कंगनाको सफलतामा पुरा बलिउड चुप रहेको तनुश्रीको बुझाई छ ।
निरन्तरको प्रयासले उनी बलिउडमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्षम भइन् । कंगनाको मातापिता वा सन्तान फिल्ममा छैनन् । उनी आफ्नी बहिनी रंगोली रनवतसँग मुम्बाईमा बस्छिन् । बहिनी रंगोलीमाथि २००६ मा एसिड अट्याक्ट भएको थियो । कंगना बर्षमा एक पटक आफ्नो जन्मथलो पुग्छिन् ।
अभिनेता अजय देवगनसँग समेत कंगनाको नाम जोडिएको छ । उनीहरुले वान्स अपन अ टाइम इन मुम्बईमा साथै काम गरेका थिए । कंगनाले एक अन्र्तवार्तामा भनेकी थिइन्, बिवाहितसँग सम्बन्ध गाँस्नु मेरो लागि भुल थियो ।
त्यसपछि उनको नाम जोडियो, हृतिक रोशनसँग । उनीहरु क्रिस–३ मा एकसाथ काम गरेकी थिइन् । यसका साथै कंगनाको नाम ब्रिटिश अभिनेता निकोलस ल्यफरटीसँग पनि जोडियो ।
सोमबार २९, भदौ २०७७ ०८:११ मा प्रकाशित
भत्केको सडक मर्मत गर्दै रानीवन युथ क्लवका युवा खेलाडी (फोटो फिचर)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितताबारे छानबिन गर्न विभागको निर्देशन
मासिक ४ अर्ब आय गुमाउँदै नेपालकाे हवाई क्षेत्र, पहिलेकै अवस्थामा फर्किन २०२४ सम्म कुर्नुपर्ने
आफ्नै ‘मिर्गौला बिक्रीमा’ भन्दै विज्ञापन गर्ने यी युवक !
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई कोरोना संक्रमण
सरकारले डा. केसीलाई भन्यो – यो बेला अनशन सुहाउँदो विषय होइन
१०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता बाँड्दा म मन्त्री थिएँ : प्रधानमन्त्री ओली
अफगानिस्तानमा सैनिक ब्यारेक लक्षित गर्दै भएको आक्रमणमा ९ जना मारिए
भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी प्रहरी हिरासतमा
थप १ हजार ९११ जनामा कोरोना पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या नाघ्यो ५ सय
दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक, कति बजे छ टीकाको उत्तम साइत ?
कैलालीमा कार्यरत दुई जना सशस्त्र प्रहरीमाथि जबरजस्तीकरणी गरेको आरोप, जाहेरी दर्ता
उपभोक्ता समितिमा एकलौटी काँग्रेस कार्यकर्ता राखेपछि खप्तड छेडेदह ६ को वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवसायीलाई फेरि लकडाउन हुने डर
खेल मैदानको माग गर्दै युवाले खेले सडकमै फुटबल र क्रिक्रेट
पीसविनका दुई कर्मचारी सम्मानित
बुढीगंगामा भालुको आक्रमणमा परी एक जना घाइते, अवस्था चिन्ताजनक
काँग्रेस कार्यकर्ताबीच कुटाकुट, दुई जना घाइते, तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा
तीन महिनापछि साँफे मार्तडी सडक सञ्चालन
केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने काँग्रेस नेता पाण्डेको घोषणा, वर्तमान नेतृत्वले भनेजस्तो आकर्षण थप्न नसकेको आरोप
रगत दिएर पत्रकार जोशीले बचाए ८ वर्षिय बालकको ज्यान